hacking windows — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited January 2009 in Help Desk
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေвЂ¦.
ကွန်ပြူတာပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အကူအညီလိုတိုင်း MZ သို့ လာစမြဲပါ။ အကူအညီတောင်းလိုက်တိုင်း ရစမြဲပါ။
ကျေးဇူးကြီးပေ တို့အဖွဲ့ ဝင်တွေвЂ¦вЂ¦
ဒီတစ်ခေါက် ကျနော့်ပြဿနာ က ဒီလိုပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို တစ်ယောက်ယောက်က Savemode ထဲ က Administator Account ထဲမှာ ရောвЂ¦ရိုးရိုး Administator Account ထဲမှာပါ Password ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်вЂ¦вЂ¦.အဲဒါကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရင် ရနိုင်မလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ်вЂ¦
Guest Account ထဲကနေ Run ထဲမှ cmd ရိုက်ထည့် ၊ နောက်ပြီး net user Enter, net user вЂњ Adimistator name вЂќ * enter နည်းနဲ့ လည်း ဖြေရှင်းလို့ မရပါ။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်းများ ပေးကြပါအုံး လို့ လေးစားစွာ ဖြင့် အကူအညီတောင်းခံ အပ်ပါကြောင်းвЂ¦.
windows XP CD နဲ့့ boot တက်လိုက်ပါ..ပြီးရင် repair လုပ် မယ်ဆိုပြီးရွေးပေးပါ..
ကျွန်တော်ပြော တာ recovery console ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်. license agreement ကို accept လုပ်ပြီးရင် ရွေးရ တယ်လေ အဲနေရာမှာပြောတာ.. အကို windows တင်ထားတဲ့ partition ကို repair လုပ်မယ်လို့ရွေးပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ windowns တင်တဲ့ stats တွေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားလိုက်. အဲမှာ Installing Hardware Information ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင် shift + F10 ကို နိုပ် အဲမှာ command prompt ကြလာလိမ့်မယ်.. command prompt ထဲမှာ
// for e.g. : net user administrator *(press enter)
အဲသလိုလေး လုပ်လိုက်.. ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မရှင်းတက်ဘူးဗျ.. အဲသလောက်ပဲပြောတက်တယ်.. အဆင်ပြေပါစေဗျာ
အမှန်တော့ screen shoot တွေဘာတွေနဲ့ပြသင့်တာ အဆင်မပြေလို့
boot with winternals or Hiren.
then change the admin passwd and restart ur pc and that's all the process.
Hiren's Boot CD နဲ့ boot တက်ပြီး password ကို reset လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်....
အခုဆို Hiren's Boot CD က version 9.7 ရနေပါပြီ ။